Sanadguuradii 72-aad ee SYL oo maanta Soomaaliya laga xusayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Sanadguuradii 72-aad ee SYL oo maanta Soomaaliya laga xusayo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame on 15th May 2015
Mareeg.com: Waxaa maanta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobollada dalka laga xusayaa munaasabadda malinta 15 May oo ku beegaan markii 72 sano ka hor la aasaay Ururkii Dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobanimo doonka ee SYL.
Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ayaa Maalmahanba ku howlanayd diyaarinta Munaasabadda weyn oo lagu sanadguuradii 72 aad ee ka soo wareegtay aas’aaskii ururka SYL.
Maxamed C/laahi Xassan Nuur oo ah wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha xukuumada Soomaaliya oo ka hadlay ahmiyadda maalintaan ay u leedahay Shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay tahay maalin la oran karo inuu bidhaamay iftiinkii ifafaalaha nabada Soomaaliya, wuxuuna Wasiirka Hambalyo u diray dhalinta Soomaaliyeed.
Ururka dhallinyarada Qaranka Soomaaliyeed iyo Ururro kale oo dhallinyaro ayaa dhankooda wada qaban qaabo xooggan oo lagu weyneynayo maalinta 15-ka May.
Qaar ka mid ah Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa tagi doonta goobaha taariikiga ah ee lagu xusuusto 13-kii dhalinyaro ee u soo halgantay neecawda xornimo ee aan maanta heysano.